Wagner Moura ku Star muApple TV + Series "Shining Vasikana" | Ndinobva mac
Wagner Moura kuita nyeredzi muApple TV + akateedzana "Shining Vasikana"
Chiso chitsva chinozivikanwa icho gore rino chichatangawo kuburitsa vhidhiyo yeApple. Wagner moura, Pablo Escobar kubva kune inozivikanwa nhepfenyuro "Narcos", ichave nyeredzi yenyowani nyowani yatichaona gore rino paApple TV +.
Chichava chitsva chitsva chinonyengera chinonakidza chinonzi «Kupenya Vasikana«. Kana tichifunga nezvekuti kutora mafirimu hakusati kwatanga, zvingangodaro kuti kuchazoburitswa mukupera kwegore. Isu tatova nechimwezve chikonzero chekunyorera kuApple TV + kana kusimudzira kwegore rapera kwapera.
Deadline yakaburitswa svondo rino kuti Wagner Moura, mutambi ane mukurumbira anoita basa ra Pablo Escobar PaNetflix nhepfenyuro "Narcos," achatamba nyeredzi padivi paElisabeth Moss mune nhepfenyuro nyowani yeApple TV + inonzi "Shining Girls."
Iyi nhepfenyuro ichave yekufananidza nguva yekufamba inonakidza zvichibva parinozita rezita rimwe chete nemunyori. Lauren anotuka. Nyaya inotenderera pamurume asina pekugara kubva panguva yeChicago kushushikana anowana kiyi yeimba yakavhurwa panguva dzakasiyana munhoroondo yeguta reNorth America. Nekudaro, kuti ufambe nepasuo, iwe unofanirwa kuenda kuuraya vakadzi vakasiyana.
Elisabeth Moss ("Mad Men," "The West Wing") ichaita basa remutori wenhau uyo ​​akapona pakurwiswa muma1980, uye nanhasi achiri kutevera uyo akaedza kumuuraya. Moura achatamba naDan, mutori wenhau uyo ​​anoburitsa nyaya yacho.
Showrunner Silka Luisa ari kugadzirisa bhuku raBeukes kweterevhizheni uye achashanda semugadziri mukuru. Moss ichagadzira zvakare nhepfenyuro kuburikidza neRudo & squalor Mifananidzo studio pamwe naLindsey McManus. Apple TV + yakatsanangura kuti "Kupenya Vasikana" chikamu chechibvumirano neAppian Way Productions, muridzi we Leonardo DiCaprio. DiCaprio ichagadzira yepamusoro pamwe naJennifer Davidson.
Tichifunga nezvekuti kutora mafirimu kuchiri kutanga pane zvakateedzana, hatigone kutarisira kuti itange kuratidzwa paApple TV + kusvikira Kupera kwegore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Wagner Moura kuita nyeredzi muApple TV + akateedzana "Shining Vasikana"
macOS 11.2.2, AirPods 3 dhizaini uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Apple inokumbira vanogadzira kuti vadzore iyo Kit muna Kubvumbi